China CGSZ4225-24 Yekumhanyisa Yekumusoro Girazi Yakatwasuka Mutsara Kupeta Muchina Kugadzira Line （L mhando） vagadziri uye vanotengesa | SUNKON
CGSZ4225-24 Yekumhanyisa Yekumhanyisa Girazi Yakatwasuka Mutsara Kupeta Muchina Kugadzira Line （L mhando）
Kudzora Sisitimu: PLC
Port: Shunde, Guangzhou, Shenzhen, China
Pasuru: Yakaputirwa ne PE. Firimu kana Play-huni bhokisi
Mitemo yekubhadhara: T / T, L / C, Western Union, nezvimwe
Nguva yewarandi: Gore rimwechete
Mutengo: Tora Yekupedzisira Mutengo
■Iyo miviri yakafanana mitsara yakatwasuka 'pasi uye arris yegirazi inogona kugadziriswa panguva imwe neyakaomarara, yakanaka kukuya uye pneumatic polishing.
■Yese-in-imwe chimiro chemuchina uye redunhu bhokisi yakanaka kune isina mvura, yekuchengetedza nzvimbo uye iri nyore kushanda. Mutumbi mukuru unotora simbi yakakandwa pamwe nekurapwa.
■Yakaiswa ine yakanakisa mutsara gwara uye sikuru mandrels iyo inovimbisa iyo yekugadzirisa chaiyo. Chikomboredzo chinofambiswa padivi sisitimu ndeye W furemu dhizaini, iyo inowedzera iko kurongeka kwekufamba uye mwero wekugadzikana; zvakare inogona kuwedzera nguva yehupenyu yeiyo mitsara rack
■Chinzvimbo chakaruramisa chishandiso chakawedzerwa pamushini, icho chinogadzirisa dambudziko rinotsauka regirazi diki, uye zvinyatso kuona mashandiro ehungwaru emakina akabatana kana uchinjisa girazi.
■PLC kutonga pamwe nekubata skrini, iyo data yekumisikidza uye yekukuya mamiriro egirazi anogona kuratidza pane inodzora nzvimbo. Kugadziriswa kwehupamhi, ukobvu, uye kusimudza kwemaoko epamusoro anogadziriswa otomatiki.
■Iyo yakavandudzwa pneumatic polishing inoshandisa yakakwira chaiyo mitsara yegwara njanji yekutungamira uye chimiro ichi chinoita kuti polishing igadzikane uye yakavimbika, pamwe nekuchengetedza vhiri rinokuya zvinobudirira.
Gonhi uye hwindo Girazi
Girazi Ukobvu 3-25mm
Min Yakagadziriswa Saizi 350 * 350mm
Max Yakagadziriswa Saizi 4200mm (CGSZ4225)
Maitiro Ekumhanyisa 1-15m / min
Kushanda Kureba 920mm
Yese Simba 47kw
CHIKAMU CHINOKOSHA CHIKAMU
01 Zvinonzwisisika Kurongeka kwemavhiri
Tora zita rakakurumbira remota "ABB", uye kurongeka kwemavhiri kuti aite mashandiro akanaka pamucheto wegirazi. Iwo maviri akafanana mitsara yakatwasuka 'pasi uye arris yegirazi inogona kugadziriswa panguva imwe neyakaomarara, yakanaka kukuya uye pneumatic polishing
02 Yakachena wedunhu bhokisi
Inotora Schneider magetsi emagetsi uye Nokia PLC. Yese-in-imwe chimiro chemuchina uye redunhu bhokisi yakanaka kune isina mvura, yekuchengetedza nzvimbo uye iri nyore kushanda.
03 Pneumatic makorari
Ose makorari mavhiri anotora pneumatic makorari, uye tiye kupukuta musoro uri mukati nekubuda pneumatic panguva imwe chete, yakashongedzerwa neakakwira-chaiyo mota yekutakura, iyo polishing mhedzisiro inovimbiswa
04 Vhura-vhara kutonga kwegirazi yekugadzirisa upamhi
Siemens servo mota inogadzirisa kuvhura uye kuvhara kwemuchina kuti ive nechokwadi chekumhanya kwakatsetseka kunyangwe mune kumhanya kwazvo.
05 Extra yekucheka huwandu unoona mudziyo
Kana iyo yekuwedzera Edge yegirazi rinouya bataes mudziyo uyu, zvichaita pasa chiratidzo kuPLC uye muchina uchaziviswa ku kunonoka kwe thndizvo kuwedzera kumucheto. Ipapo girazi rinokuya uye kupora mhando ichave iri nani kwazvo.
06 Chikamu chekumanikidza kururamisa chishandiso
Input dhizaini ine padivi kumanikidza kururamisa mudziyo, izvo zviri nyore kugadzirisa uye kugadzirisa.
Pashure: CGX371 girazi yakatwasuka-mutsara Beveling muchina ne PLC kutonga
Zvadaro: CGSC641 Dombo Kutenderera Muchina
CGSZ3025-12 Yekumhanyisa Girazi Yakarurama-Mutsara Doub ...
Girazi Miter Machine, Dombo 45 Degree Edging Machine, Girazi Inosiyana Miter Machine, Kukuya Matombo Midziyo, Fenicha Girazi Edging Machine, Dombo 45 Dhigi Yekugeda Muchina,